Mareykanka oo cunaqabateyn saaray wasiirka arrimaha dibaada Iran Mohammad Javad Zarif - BBC News Somali
Mareykanka oo cunaqabateyn saaray wasiirka arrimaha dibaada Iran Mohammad Javad Zarif
1 Agoosto 2019
Image caption Wasiirka arrimaha dibadda Iran Mohammad Javad Zarif
Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay wasiirka arrimaha dibadda Iran Mohammad Javad Zarif.
Cunaqabateynkan ayaa wuxuu saameynaya dhammaan hantida uu Mr Zariff uu Mareykanka ku leeyahay in la xayiro" ayey tiri wasaaradda maaliyadda.
"Javad Zarif wuxuu meel mariyaa siyaasadaha khatarta leh ee hoggaamiyaha ruuxiga Iran Ayatollah Ali Khamenei" ayuu yiri wasiirka maaliyadda Steven Mnuchin.
Me Zarif wuxuu boggiisa Tweetarka uu ku qoray inuu Mareykanka uu cunaqabateyn u saaray isaga oo sheegay iney u arkaan mid ay siyaasaddiisu halis ku tahay.
Iran oo markab ajnabi ah qafaalatay
Xiisadda ka dhex aloosan Mareykanka iyo Iran ayaa cirka isku sii shareertay wixi ka dambeeyey marki uu sanadki hore Mareykanka uu ka baxay heshiiski niyukilarka ee 2015-ka la galay ee lagu xakameeynayey barnaamijyada niyukilarka Iran.
Iran ayaa dhawaan sheegtay iney jabineyso waxyaabihi uu heshiiskaasi ka hor istaagayey ayna dib u billaabeyso tayeynta macdinta Yuraaniyamka, oo ay sheegtay iney quwad koronto ka dhalaneyso balse ujeedkeeda guud uu noqon karo bamka Niyukilarka iney sameysato.
Xiisadda isa sii tareyso iyo dhacdooyinka iska soo daba dhacaya ee gacanka ka taagan ayaa laga cabsi qabaa iney horseedaan dagaallo iney ka dhacaan marin biyoodka maraakiibta caalamka Muhiimka u ah.
Mareykanka muxuu arrintan ka yiri?
Mr Mnuchin ayaa Mr Zarif ku tilmaamay inuu yahay "afhayeenka Iran caalamka uga hadlo".
"Mareykankana wuxuu farriin cad uu u dirayaa xukumadda Iran oo aan la aqbali karin dabeecadaha ay la soo baxday" ayuu yiri.
"Sida oo kale xukumada Iran waxay shacabka Iran u diidday iney helaan adeegga baraha bulshada, Wasiirka arrimaha dibada Iran Mohammad Javad Zarif wuuu dacaayadihiisa siyasadeed uu sii mariya baraha bulshada," ayuu yiri Mr Mnuchin.
Iyada oo Mr Zarif cunaqabateynkaasi uu saaran yahay haddana wuxuu safar uu ku joogaa New York isaga oo ka qayb galayo shirka ganacsiga looga hadlayo ee qaramada midoobay, ayuu yiri wariyaha BBC Gary O'Donoghue oo u warramay wargeyska Washington Post.
Mr Zarif siduu uga jawabay?
Me Zarif wuxuu boggiisa Tweetarka uu ku soo qoray inuu Mareykanka uu cunaqabateyn saaray isaga oo sheegay iney u arkaan mid ay siyaasaddiisu halis ku tahay.
"Sababta uu Mareykanka aniga ii bartilmaameedsanayo ayaa waxay tahay aniga waxaan Iran caalamka uga ahay afhayeenka ugu horreeya. Mar la weydiiyey ma tahay arrintan mid dhab ah isla-markaana xanuun badan? Wuxuu ku jawaabay.
"Waad ku mahadsan tihiin inaad anigu ii aragtaan inaan halis weyn ku ahay siyaasadihiinna."